ငါပြန်ရောက်သွားတယ်သို့မဟုတ် relapse ၏အန္တရာယ်ဖြစ်၏။ (အရေးပေါ်အခြေအနေများ)
ဦးလေး Bob ၏ Porn Recovery ကို Inspiration (ယောက်ျားတွေရာပေါင်းများစွာကနေဖှယျအကြံပေးချက်များ)
ဗီဒီယို - NoFap | ဒီဗီဒီယိုကိုပြန်မသွားမီကြည့်ပါ
အကြှနျုပျ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိတ်တလန် button ကို (ဤစာမကျြနှာကိုအောက်တွင်ကလေးစာမျက်နှာများတွင်ပြန်ထုတ်ပေး)
တစ် ဦး က relapse ပြီးပြည့်စုံသောပြန်လည်သတ်မှတ်မဆိုလိုပါ အရက်သောက်ခြင်းဖြင့်နောက်ထပ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိခိုက်ပါနှင့်။
တစ်ဦးကအလွန်ဖျော်ဖြေမှု Anti-relapse peptalk
ရေအေး technique ကို
အကြှနျုပျ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိတ်တလန် button ကို
အကြှနျုပျ၏ relapse - သင်ခန်းစာတွေသင်ယူခဲ့တယ်
အမျိုးသမီးများက Relapse Pep ဟောပြောပွဲ
ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်များက relapse အပေါ်အတှေး
အရေးကြီးသောအယူအဆ - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းကင်း-စွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက် midbrain function ကိုချို့ယွင်း, သုတေသီများရှာတွေ့
ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ဆုချဖို့အချိန်မယ့်, သင်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲဤမျှကာလပတ်လုံးကြာင့်, အပေါ်ကလာပါ။
ရဲ့ဖွင့်, အခြို့ porn မှာအဘယ်သူမျှမတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုကြည့်ပါစို့, သင်ကိုဖန်ဆင်းပါတယ်ဘယ်လောက်တိုးတက်မှုကြည့်ပါ။
သငျသညျ porn သင်ပိုကောင်းခံစားရစေပါလိမ့်မယ်, စိတ်ဆင်းရဲခံစားရသည်။
porn ကြောင်းမကောင်းတဲ့သည်မဟုတ်, တိုင်းကောင်လေးတချို့စင်မြင့်မှာရှုမြင်, သငျသညျစသညျ, သမုဒ္ဒရာအတွင်းတစ်စက်ပါပဲ
OK ကိုမျှခဲယဉ်းညစ်ညမ်းရုံဒါမှမဆိုးရဲ့ nudes ။
တစျခုထက်ပိုဗီဒီယို, အစဉ်အဆက်ကနောက်ဆုံးတဦးတည်းအပေါ် လာ. ကြည့်
သငျသညျလ၏အလယ်၌, မနေ့ကတစ်ဦးကအင်္ဂါနေ့ပြန်ရောက်သွားတယ်။ သင်တစ်ဦးလတ်ဆတ်တဲ့အပတ်က / လပေါ်ပြန်လည်နာလန်ထူစတင်နိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်အားလုံးအောင်မြင်သော Recovery start ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရဲ့တစ်ခုခုနင်္ဂနွေနေ့ဒါမှမဟုတ်လတစ်လရဲ့အဆုံးတိုင်အောင်အညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ကြစို့
ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အခြေခံအားဖြင့် "တဦးတည်းနောက်ဆုံးအချိန်ရဲ့တဦးတည်းကိုပိုမိုကြည့်ရှုကြကုန်အံ့" ကိုနှိမ့်ချပြုတ်, ထိုသို့ဘယ်တော့မှဖွင့် အစဉ် နောက်ဆုံးတစ်ခု။ တစ်ချိန်ကသင်တို့အပေါ်မှာအရှက်ကွဲခြင်းငါ့ကိုအရူး; နှစ်ကြိမ်ငါ့ကိုအပေါ်အရှက်ကွဲခြင်းငါ့ကိုအရူး။
သငျသညျမကြာသေးမီကပြန်ရောက်သွားတယ်လျှင်, နောက်နေ့ 1-2 ပတ်:
သင်အိပ်ရာမဝင်မီသင့်စက်ပစ္စည်းများကိုညတိုင်းသင်၏ကားထဲတွင်ထည့်ပါ (သင်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် (သို့) မိသားစုဝင်တစ် ဦး ဦး ၌ထားခဲ့လျှင် ပို၍ ပင်ကောင်းသည်)
သင်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်လိုပါက Starbucks သို့သွားပါ (နေရာတိုင်းတွင်ရှိနေသည်)
အိမ်မှာသုံးရမလား သင်၏ ဦး နှောက်ကိုပိတ်ထားရန်ပြောပါ၊
သင်၏လူမှုပြက္ခဒိန်ကိုဖြည့်ပါ - နောက်အပတ်အတွက်ညတိုင်းထွက်သွားရန်စီစဉ်ပါ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီသွားပါ။ ပြဇာတ်ရုံတစ်ခုသို့သွားပါ။ အချိန်ယူပြီးသင့်ကိုအိမ်မှထုတ်ယူနိုင်သည်။ သင်ဤကြိုတင်စီစဉ်ရန်ရှိသည် အကယ်၍ သင်ထိုသို့မပြုလုပ်ပါကသင်သည်စွဲလမ်းနေသော ဦး နှောက်၏ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည်။ “ ငါဒီအီးမေးကိုစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်။ ”
သင့်ကိုယ်သင်သနားကြင်နာပါ။ “ လူတိုင်းအတွက်ဒါဟာခက်ခဲပါတယ်။ ငါ x နှစ်ပေါင်းစွဲခဲ့; ယင်း ထင် ခက်ခဲတဲ့ဖြစ်ဖို့ ... "
သင် reboot စလုပ်တဲ့အခါဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလိုက်မလဲ။ သငျသညျ mirc အပေါ်ကြောင်းသတ်သေလမ်းကြောင်းအပေါ်ထွက်ဆွဲထားခဲ့ကြသည်။ fapdom မရှိခြင်းကြောင့်စိုးရိမ်စိတ်သည်နာတာရှည်စိတ်ကျရောဂါကြောင့်ကျိုးနပ်ပါသည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအမှုအရာသာပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်သင်၌ယုံကြည်စိတ်ချမှုမြင့်တက်လာခြင်း၊ သင်ထွက်သွားရန်ဆန္ဒရှိခြင်းနှင့်သင် porn ကိုကျော်သွားသောအခါအားကစားရုံစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာခြင်းအတွက်သံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။ ဒီမှာအမှားအတွက်နေရာမရှိဘူး။ တစ်ခုမှာကျရှုံးမှုသည်အမြဲတမ်းစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောစိတ်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သင်အဲဒီလိုမလိုအပ်ပါဘူး
ပြန်လည်သက်သာသွားသည် ကံကောင်းတာက၊ ငါကဒီ reboot အစမှာ porn ကိုရှောင်ရှားဖို့အကြောင်းပြချက်များစာရင်းလုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒါမရှိရင်ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ စာရင်းကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ဆန္ဒကိုများစွာလျှော့ချနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်၌သံသယများနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာကိုပိတ်ပြီးအိပ်ယာထဲတွင်အိပ်ရာထဲလဲနေခဲ့သည်။ အဲဒီနောက်မှာကျွန်တော့် ဦး နှောက်ဟာအရမ်းတက်တက်ကြွကြွနဲ့အိပ်ပျော်နိုင်ဖို့အတွက်အနာဂတ်အတွေ့အကြုံအတွက်ဒီအတွေ့အကြုံကိုစာရိုက်ဖို့အချိန်ဖြုန်းမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။
သင်တစ်ယောက်တည်းရှိစဉ်တုန်လှုပ်မှုများနှင့်ပြhaveနာရှိပါကလူများသင့်ကိုတွေ့နိုင်မည့်နေရာကိုခေါ်သွားပါ။ အလေးအနက်ထား, သင်၏ကုလားကာဖွင့်လှစ်, သင့်အိမ်၏ဘုံintoရိယာသို့ထွက်, အပြင်မှာထိုင်သွားကော်ဖီဆိုင်ကိုသွား။ သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်သင်၏အမှောင်ထုတွင်မနေပါနှင့်။ သင်အဲဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်သင်ကျရှုံးလိမ့်မယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့ပြန်လာပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်မရဲ့ခံစားချက်ဟာ rollercoaster လိုမျိုးတုန်နေတယ်။ သငျသညျသှေးဆောငျနေသောယောက်ျားတွေ, အဘို့, IT မပြုပါ !!! အဲဒါလုံးဝမထိုက်တန်ဘူး သင်ရုံ shit ကဲ့သို့ခံစားရမယ့်နေကြသည်။ ထိုမျှမကပျော်စရာခံစားမှုပါပဲ။
ဖေ့ (စ်) ဘွတ် (hot-girl-pic) ကိုကျပန်းကြုံတွေ့ရတဲ့အခါဒီမှာဒီမှာပစ္စည်းပစ္စယတွေလုပ်နေတယ်။ ငါအကျွမ်းတဝင်ကွင်းဆက် - တုံ့ပြန်မှု -of ခံစားချက်တွေကိုရနှင့်ငါသုံးရက်အတွင်း fapped ကြပြီမဟုတ်သောကြောင့်ငါတကယ်ခက်ခဲလျင်မြန်စွာရ။ ငါအာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ်နှစ်ဆ -Down နှင့်လက်မှာအလုပ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်။ ဒါပေမယ့်ငါလုပ်ဖို့ပို။ ပို။ ခက်ခဲရှာပါ။ ငါရေချိုးရန်ဆုံးဖြတ်သည် ငါရေချိုးခန်းရှင်သန်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံးစဉ်းစားနေဆဲ, ငါသည်ဤအမှုကိုကျော်ရနိုင်။ ထိုအခါငါရေချိုးခန်းသို့သွား, overdrive mode မှာ3pushups လုပ်။ ရေချိုးခန်းသို့ခုန်။ ငါအဲဒီမှာရှိတုန်းကထူးဆန်းတဲ့လုပ်ရပ်အချို့ကိုစတင်လုပ်တယ်။ သူကရေလို link အကြောင်းပြောခဲ့တဲ့ဒီ Bruce Lee အင်တာဗျူးကိုကြည့်ပြီးမှတ်မိသေးတယ်။
ငါဒီမြင်ကွင်းမြင်ကွင်းကိုစတင်မြင်၏။ ၎င်းသည်လုံးဝကျပန်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်အကြောင်းအချို့စာအုပ်များကိုဖတ်ရှုစဉ်ကကျွန်ုပ်နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ အဲဒါကိုမတိုက်ခိုက်ဖို့ပါ။ ငါဖြုန်းတီးပစ်လိုက်တဲ့စွမ်းအင်အားလုံးကိုဒီလှပပြီးကြည်လင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲကိုထည့်သွင်းလိုက်မယ်။ ပြီးတော့အဲဒါကိုစကြဝofာရဲ့စွမ်းအင်နဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်တယ်။ (မင်းကိုသတိရပါ၊ ဒါကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပဲဆိုတာငါသိတယ်။ )
ငါအဲ့ဒီစွမ်းအင်ကိုအဲဒီမှာသိုလှောင်ဖို့၊ ရေချိုးပြီးတဲ့အထိ“ ချက်ပြုတ်” ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ငါပြီးသွားတဲ့အခါငါအရမ်းပျော်တယ်။ ငါ“ စွမ်းအင်” ကိုရယူဖို့“ လက်လှမ်းမီ” ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ ငါကသူ့ရဲ့သိုလှောင်မှုကိုသုံးခွင့်ပြုတဲ့အတွက်စကြဝuniverseာကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤစွမ်းအင်ကိုအပြုသဘောဆောင်သောအရာများဖြစ်သောအလုပ်၊ ကစားခြင်း၊ ဆက်ဆံရေးစသည်တို့အတွက်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဆုံးဖြတ်သည်။
အဲဒီလိုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ငါ ၂၀-၃၀ မိနစ်လောက်တွေးတောဆင်ခြင်ပါတော့မယ်။ ငါ့မှာမော်ကွန်းလျှော့ပေါ့သောတွေးတောဆင်ခြင်မှုရှိခဲ့ပြီး၊ နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စီမံချက်များကိုလုံးဝပြီးမြောက်အောင်မြင်သည်ဟုခံစားရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ယခင်ကထိန်းချုပ်မှုလုံးဝမရှိခဲ့ဟုကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှုမြင်သုံးသပ်မိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ (အနည်းဆုံးတော့ဒီနေ့ငါဒီနေ့မှစပြီးနေ့စဉ်ငါကြိုးစားမယ်။ )
တစ် ဦး မူးရူးပြန်သွားရုံရုံအလွန်ကွဲပြားခြားနားရမည်ဖြစ်သည်။ ၄ လနီးပါးကြာအောင်ငါပြန်တက်လာပြီး (အရက်အလွန်အကျွံသောက်ပြီးနောက်) ယခုအပတ်တွင်ကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသည့်တုန်ခါမှုသို့မဟုတ်ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများမရှိခဲ့ပါ။ ငါ၏အယခင်ကပြန်ဖြစ်အားလုံးသည်တိုတောင်းတဲ့ / တချွတ်အမျိုးအစားအခြေအနေများဖြစ်ကြသည်ကိုထိုသူအပေါင်းတို့သည်ငါဒီတပတ်လုံးကိုကျော်စစ်တိုက်ခြင်းထက်နောက်မှတစ် ဦး တွန်းအားအများကြီးလျော့နည်းစေ၏။
ငါထင်သကဲ့သို့ငါ, ဒီစိန်ခေါ်မှုပျော်စရာအဘို့စတင်ခဲ့သည်။ ငါ "ဝက်အူ! ဒါမကောင်းဘူးလို့တော့မထင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒါကငါပြန်ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့်“ ကောင်း” တာကတော့၊ ငါပြန်ရပြီးတဲ့နောက်၊ (porn နှင့်မလုံလောက်ပါ။ ကျွန်ုပ် fapped ဖြစ်သော်လည်းdညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်မိပါစေ။ ) ဒုတိယအချက်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ပြန်လည်အသက်ဝင်ခြင်းမတိုင်မှီတွင် fapping မပြုခြင်းမှရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့်နောက်မှ၊ ကျွန်တော်သင့်ကိုဥပမာပေးနိုင်သည်။ NoFap မတိုင်မီကျွန်ုပ်တွင်နေ့စဉ် ၅ မိနစ်ခန့်အကြီးအကျယ်ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဒါဟာ nofap စဉ်အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားပေမယ့်ပြန်လည်သတ်မှတ်ပြီးနောက်ပြန်လာ၏။ ငါ့လက်နှင့်အတူတူပါပဲ သူတို့ရုတ်တရက်တုန်ခါလာပြီးသူတို့ကိုငါကြည့်လေလေ၊ သူတို့ကမထိန်းချုပ်နိုင်တော့သည့်အထိအထိသူတို့များများလှုပ်ခါလေလေဖြစ်သည်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်နေစဉ်အတွင်းသင်၏အကျိုးခံစားခွင့်များကိုသင်အမြဲမမြင်နိုင်ပါ။ သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့ကိုငါပြောနိုင်ပါတယ်: သင်၌အချို့ရှိသည်အလောင်းအစား။ သင်သတိမပြုမိသော်လည်း
TL; ဒေါက်တာ: ကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်တည်ဆောက်မှုမတိုင်မီအထိကျွန်ုပ်၏တိုးတက်မှုသည်မည်မျှကောင်းသည်ကိုမသိခဲ့ပါ
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိပြန်ဖွင့်သည့်နေ့ (၉) တွင်ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၉ ရက်က PMO ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီကမ္ဘာကြီးဆီကနေပါ ၀ င်ခြင်းအားဖြင့်ပြန်လည်ကျင့်သုံးခြင်းမှသင်ခန်းစာယူပြီးကျွန်တော့်ဘဝကိုအပြုသဘောဆောင်။ လူမှုရေးအရဆက်လက်ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူမှုရေးဆက်လုပ်ရန်၊ သူစိမ်းများနှင့်စကားပြောရန်၊ နေ့စဉ်ထွက်ရန်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်၊ ကျွန်ုပ်၏နေ့စဉ်အလုပ်များကိုပြီးအောင်လုပ်ရန်၊
အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းကကျွန်တော့်ကိုပြန်လည်မရိပ်မိအောင်မလုပ်ဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မလာခင်မှာငါထွက်ခွာသွားပြီဆိုတာနဲ့တူနေတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ ငါ PMO ကနေ reboot လုပ်ပြီးပြန်လည်ဆယ်တင်ချင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါက reboot ကိုဆက်ပြီးရှေ့ဆက်သွားနိုင်ဖို့ကျွန်တော့်ရွေးချယ်မှုဖြစ်စေတယ်။
လွန်စွာကူညီပေးခဲ့တယ်ကြောင်းနောက်ထပ်အရာငါအတူတူငါသည်ငါ့ PMO အခွအေနေဖြင့်လည်းကျွမ်းလောင်ခဲ့သည်သောအခါငါပြုပါရန်အသုံးပြုဘယ်တော့မှအရာ၏အပြည့်အဝနေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ထားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ပါဝင်ပါသည်:
ကော်ဖီ oatmeal / 1 ခွက်ကို -Eating
ငါဆစ် get နေစဉ်မိမိကိုယ်ကိုအကူအညီနဲ့အသံစာအုပ်၏အခန်းကို -Listening
စာကြည့်တိုက် (3.7) ငါ့စက်ဘီး -Riding
စာကြည့်တိုက်မှာငါထိုင်၊ သုတေသန၊ ကောလိပ်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဂျာနယ်ရေးသားခြင်း၊ အပတ်စဉ်ရည်မှန်းချက်များကိုစီစဉ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်ဘဝဘ ၀ တွင်လုပ်ဆောင်ခြင်းစသည်တို့မှတစ်ဆင့်အလုပ်များနေသည်။ ငါအလုပ်မှအနားယူချိန်၌ချစ်စရာစာကြည့်တိုက်မှူးများနှင့်လည်းစကားပြောသည်။
ပြန်စာကြည့်တိုက် (အခြား 3.7 မိုင်) မှငါ့စက်ဘီး -Riding
ကြှနျတေျာ့တစျခုလုံး To-Do စာရင်းကိုပယ် -Checking (က To-Do စာရင်းတွင်သွားသည်ဆိုပါကတကယ့်ဖှယျခံစားချက်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဟာ! ငါကထိုနေ့ရက်၌ပြုမိလာမှကျူးလွန်ခဲ့ကြ)
လက်ဖက်ရည် -Making နှင့်အကောင်းတစ်ဦးစာအုပ်ဖတ်နေ
စိုးရိမ်မှုတွေတိတ်ဆိတ်၌ငါ၏နှင့်အတူရင်ဆိုင်ရန်မကျြနှာကို -Sitting နှင့်ညာဘက်အိပ်ရာမဝင်မီပြန်သူတို့ထံမှငါ့တန်ခိုးယူပြီး
ငါတကယ်အသစ်တစ်ခုကိုနေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်စက်ဘီးစီးခြင်းသို့ဆည်းပူးနေလေပြီတကား ငါစာကြည့်တိုက်သို့လမ်းလျှောက်သည့်အချိန်အားဖြင့်, ငါ့နဲ့အတူ Endorphins လျှင်မြန်စွာအပြေးကြသည်နှင့်လူမှုရေးဖြစ်အရမ်းစိတ်အားထက်သန်သောကွောငျ့ငါလေ့ကျင့်ခန်းကနေဒါကောင်းသောခံစားရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုစာကြည့်တိုက်အဖြစ်လူမှုရေး setting ကိုရောက်ရှိမယ့်ပြီးပြည့်စုံသောလမ်းပါ! ဤအစီအစဉ်အပေါ်စောင့်ရှောက်ခြင်းကတည်းကငါသည်အသက်ဒီနည်းလမ်းသစ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကိုယ်နှိုက် rewiring ငါ၏အဦးနှောက်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အများဆုံးမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများထဲမှတစ်ခုမှာ“ ငါပြန်ရောက်လာပြီ။ ဒါကငါနေ့ ၁ ရက်မှစတာလား” ဟုဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းသည့်အဖြေမှာ“ မဟုတ်ဘူး” ဖြစ်သည်။ မင်းနေခဲ့သည့်နေ့ရက်များ မဟုတ် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုအပြုသဘောဆောင်သောနည်းလမ်းများဖြင့်ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ သင်၏ညစ်ညမ်းသောအလေ့အထကို“ no” ဟုသင်ပြောတိုင်းသင်၏အမှုဆောင် - ထိန်းချုပ်သော ဦး နှောက်ဆားကစ်ကိုအားကောင်းစေပြီးသင်၏စွဲလမ်းမှုကိုအားနည်းစေသည်။ သူသည်တနင်္ဂနွေနေ့မှထွက်ခွာသွားသောကြောင့်အဝလွန်သူတစ် ဦး သည်နောက်တစ်နေ့ပြန်သွားသလား။ မဟုတ်ပါ။ ရိုးရိုးလေးပြန်သွားတာကနေသင်ယူရမယ်၊ Chaser အကျိုးသက်ရောက်မှု ရက်အနည်းငယ်အဘို့, အနာဂတျမှာအလားတူတဦးတည်းကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ခြေလှမ်းတွေကို ယူ. , နောက်တဖန်စတင်ပါ။
နောက်မေးခွန်းတစ်ခုမှာ“ ငါပြန်သွားပြီးတာနဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုရက်ပေါင်းများစွာခုခံတွန်းလှန်နိုင်လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါမူးရူးသွားတာပဲ။ အဲဒါမှန်ကန်တဲ့ချဉ်းကပ်မှုလား။ Reboot လုပ်ခြင်းသည် rewiring လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်“ urges” အပိုင်းကိုအနှေးနှင့်အမြန်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်တိုက်တွန်းမှုများကိုများများအမြန်ရလေလေသင့် ဦး နှောက်သည်ဟန်ချက်ညီပြန်လေလေဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်မူးရူးကစလစ်ထက်ပိုပြီးနှေးကွေးသွားတယ်။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သည်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း (တပ်မက်ခြင်း) ဖြင့်ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုသင်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ တပ်မက်ခြင်းများကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစေပြီးသင်၏စွဲလမ်းမှုကိုပိုမိုပြင်းထန်စေနိုင်သည်။ တဦးတည်းကောင်လေး said:
အော်ဂဇင်တစ်မျိုးတည်းရပြီးနောက်ငါထွက်လာတဲ့အခါငါ reboot ပြန်လုပ်ဖို့အောင်မြင်မှုပိုရလေ့ရှိတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးရက်ကငါနာရီဝက်အကြာမှာအရက်မူးပြီးအိုလေးလုံးရှိခဲ့တယ်။ ငါအရက်အလွန်အကျွံသောက်လျှင် (မကြာခဏဆိုသလိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုပြီးကျွန်ုပ်၏ဆန့်ကျင်ဘက်ကာလပြီးဆုံးသည်နှင့်များစွာသောအစည်းအဝေးများသို့သွားသည်) ကျွန်ုပ်သည်အလျင်အမြန်ပြန်ဖြစ်သွားသည်။
ငါဒီဖြစ်စဉ်ကိုစစလုပ်တုန်းက၊ ထိုအပင်ရက်ပေါင်းအောက်ပါ။ PMO ကို ပို၍ ရှောင်ရှားရန်ဤအချိန်သည်အရေးကြီးသည်။ သင်ပြန်လာပြီးနောက်၌ပင်အခြား“ ထိခြင်း” ကိုမလိုချင်စေရန်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုလေ့ကျင့်ပါ။ ၎င်းသည်သံသယဖြစ်ရန်မခက်ခဲသော်လည်း၎င်းသည်ကျိုးနပ်ပါသည်။ အခုတောင်မှ, ငါနောက်ဆုံးပြန်လာသောအနည်းငယ်ပြီးနောက်, ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ပေါ်ဆင်းမပြုခဲ့ခြင်းနှင့် "ကောင်းပြီရှုပ်ထွေး, ကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်မရှိ, ထပ်ကြိုးစားပါနှင့်ရှေ့ဆက်ဖို့" ဟုပြောသည်မဟုတ်ဘဲ "ငါရှုပ်ထွေး, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမုန်း, အဘယ်ကြောင့်ငါဖြစ်၏ ဒီလိုမျိုး? ငါဘယ်တော့မှပြန်ကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူး” ဤအရာအားလုံးသည်သင်၏စိတ်ကိုကျူးကျော်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်၊ သို့သော်သူတို့သည် ပို၍ ပို၍ ဝေးလံလာသည်။
၎င်းသည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလအတွင်းပြန်လည်အသက်မရှင်နိုင်သည့်ရှားပါးသောစွဲလမ်းသူဖြစ်သည်။ ငါသည်အခြားစွဲလမ်းမှုမှပြန်ကောင်းလာသူများထက်အကျင့်ဆိုးစွဲသူများ၏များပြားလာမှုနှုန်းသည်ပြန်လည်သက်ရောက်လာသည်ဟုသံသယရှိသည်။ အချက်များနှင့်အစပျိုးနေရာတိုင်းဖြစ်ကြသည်။ အသုံးပြုသူအများစုသည်သူတို့၏ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်နာရီပေါင်းများစွာကုန်ဆုံးလေ့ရှိသည်။ နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည် (အနောက်တိုင်း) တည်ရှိမှု၏ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
တစ်ဖျော်ယမကာစပ်အဖြစ်အလုပ်တာတစ်ဦးမကြာသေးခင်ကသမ္မာသတိရှိကြလော့ရက်ဆိုပါစို့။ မပေးကောင်းတစ်စိတ်ကူး။ သို့တိုင်ထိုအရက် s ကို / သူအရက်လောင်လိမ့်မည်ဟုရှိမရှိအဖြစ်ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ သငျသညျအဘယ်သူမျှမရှေးခယျြမှုရှိသည်။ သငျသညျ လိမ့်မည် sexy ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်သည်အရက်ကိုမသောက်ဘဲအရက်နှင့်တူသော်လည်းခုခံတွန်းလှန်နိုင်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြွေးအနည်းငယ်ပေးပြီးဆက်လုပ်ပါ။
တစ် ဦး က relapse ရုံ "လတ်ဆတ်တဲ့သံသရာ။ " ဟုတ်ကဲ့၊ ၎င်းသည်အာရုံကြောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာလှုပ်ခတ်မှုအချို့ကိုရက်အနည်းငယ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပြင်းထန်သောစိတ်များအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာနိုင်ပြီးစိတ်၊ စိတ်တိုလွယ်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ သင့် ဦး နှောက်ကသင့်ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးထိုးသွင်းနိုင်လျှင်ကြီးမားတဲ့ပြonlyနာတစ်ခုပဲ။
လာမယ့်ရက်အနည်းငယ်ကျော်ခိုင်ခံ့ရမ္မက်များအတွက်စောင့်ကြည့်ရမည်။ မြင် သင်ကလိင်ပြီးနောက် Chaser လိုအပ်ပါသလား
အခြားသူများကမူးရူးဖို့တိုက်တွန်းရှောင်ရှားအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနည်းစနစ်တွေ့ပြီ။ သင်တို့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်သောပေါင်းစပ်ရှာဖွေပါ။ အဖြစ်တဦးတည်းကောင်လေးကလည်း,
“ Edging” ကကျွန်မရဲ့စိတ်ကိုမသက်သာစေဘူး။ ငါမပါဘဲအတွင်းပိုင်းအပေါ်အများကြီးသာယာတဲ့နှင့်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ခံစားရတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်တံနှင့်ဘောလုံးများတွင်ရေကိုညင်သာစွာညှစ်ခြင်း၊ အသက်ရှူခြင်းနှင့်အာရုံပျံ့လွင့်ခြင်း (ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုလုပ်ခြင်း) ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိတွေ့ခြင်း၊
အာရုံအခုအချိန်မှာသင်၏အဆွေခင်ပွန်းဖြစ်၏။ ဒါကကောင်လေးသည်သူ၏ technique ကိုကရှင်းပြသည်:
သင်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းမှုကြောင့်သင့်ကိုခွင့်ပြုချက်ပေးတဲ့အခါ၊ IS သည်အလိုအလျောက်ပြန်ဖြစ်သွားသည်။ သင် "အိုကေ၊ ငါဟာချိုချိုလေးပါ၊ ကျွန်တော် MB လုပ်နိုင်တယ်လို့မှတ်ချက်ချထားပါတယ်။ " လို့ပြောပြီးတာနဲ့ဒါဟာသေချာပါတယ်။ သင်ပျက်ကွက်ပြီးပြီဆိုရင် ဒီစွဲလမ်းမှုအဆင့်မှာရှိတဲ့မည်သူမဆိုကိုကျွန်ုပ်အကြံပေးနိုင်သည့်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ သင့်ရဲ့အာရုံလွှဲပြောင်း။ ဒါကြောင့်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါဒါဒါအရေးကြီးသော။ အဖြစ်မကြာမီသင့်ရဲ့အာရုံကိုမှန်ကန်စွာပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်အတိုင်း, သင်တို့၏တိုက်တွန်းသည်အနည်းဆုံး 50% ပြိုကွဲခဲ့သည်။
porn အပြင်သင်ဘာကိုနှစ်သက်ပါသလဲ။ မင်းဘာကိုဖျော်ဖြေရတာလဲ YouTube ကိုသွားပြီးအဲဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။ လူမဆန်ပုံရသည့်လေးလံသောအလေးများကိုထမ်းသောယောက်ျားများကိုကျွန်ုပ်ကြည့်လိုသည်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်အဲဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်၊ အဲဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်တစ်ခုကိုကြည့်ခဲ့တယ်။ ထိုအရာကိုသင်မသိမီ၊ ကျွန်ုပ်သည်“ အားကစားစွမ်းဆောင်ရည် mode” တွင်ရှိပြီးခုံတန်းရှည်ပေါ်တွင် ၅ ပေါင်ထည့်နိုင်ပုံကိုစဉ်းစားသည်။ နှင့်မဟုတ်, "Shit, ဒီကနောက်ထပ်ပြန်လုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း"
သင့်ကိုမတူညီသောစိတ်အခြေအနေသို့ရောက်စေနိုင်သောဗီဒီယိုအမျိုးအစား (ညစ်ညမ်းမှု မှလွဲ၍) အမျိုးအစားအချို့ရှိသင့်သည်။ မည်သည့်“ ဝါသနာဗီဒီယိုမဆို” ကို“ ဦး စားပေးအဆင့်” mode တွင်အမြဲတမ်းထားပါ။ အမြဲတမ်း "ဦး စားပေးတ ဦး တည်း" ၌ထားလေ၏။ ပထမ ဦး စားပေး“ ကြည့်ရှုရန်” မှလွဲ၍ သင်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်စရာမရှိ။
မင်းကိုစိတ်ထဲမှာသံသယဖြစ်စရာမလိုဘဲ porn နဲ့ MB ကြည့်မယ်ဆိုရင်သင်ဟာသင်ဝါသနာပါတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာသင်ဟာညစ်ညမ်းတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုကြည့်ပြီးတာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြံပေးချင်ပါတယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးအရာ။
အမှန်တရားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောတစ်ကိုယ်ရေလူအများစု (ထိုစဉ်ဆက်မပြတ်အော်ဂဇင်မဖြည့်ဆည်းနိုင်ခြင်း) သည်လုံးဝလုံးဝရှောင်ကြဉ်ရန်လမ်းကြောင်းသို့ရောက်နေပုံရသည်။ လူအများက“ PMO No” ဟုခေါ်ကြသည်။ ငါကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအဲဒီလမ်းကြောင်းကိုကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ကျွန်ုပ်သည်လိင်မှုကိစ္စသာမကကျွန်ုပ်၏ရင်းနှီးသောရှုထောင့်မှလည်းအဆက်ပြတ်နေသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ ဒီတော့ငါအရှုံးပေးလိုက်ပြီး orgasming ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။ နေ့တိုင်းလိုလိုကမှတ်မိသလောက်တော့မပြည့်စုံသေးဘူး။
ပြီးတော့ငါတစ်ကိုယ်တော် tantra ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ karezza ရဲ့တစ်ကိုယ်တော်ညီမျှခြင်း။ ပြီးတော့အရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားပြီ။ အယူအဆတစ်ခုလုံးမှာထိန်းချုပ်မှုကိုတိတိကျကျမဟုတ်ဘဲတိတိကျကျမဟုတ်ဘဲတိတိကျကျမဟုတ်ဘဲတိတိကျကျဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်။ ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဆန့်ကျင်။ “ လိင်အင်္ဂါအနှိပ်” ဟုခေါ်လိုသည်။ ဒါကြောင့်ငါ့နည်းစနစ်တစ်ခုလုံးသည်အလွန်နှေးကွေး၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့။ လုံးဝနှင့်လုံးဝသက်တောင့်သက်သာရှိသောလိင်အင်္ဂါအနှိပ်ခံခြင်းပါဝင်သည်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက် 60-70% arousal ဇုန်၌နေရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်၎င်းကိုကျော်လွန်သွားပါကသင်သည်“ ပြန်မရသောအရာ” သို့ရောက်ရှိသွားပြီးအော်ဂဇင်ကိုရွေးချယ်ခြင်း မှလွဲ၍ အခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါ။
ဤတစ်ကိုယ်တော်နည်းလမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနူးညံ့သိမ်မွေ့။ ချစ်ခင်။ တွေးတောဆင်ခြင်သောမိမိကိုယ်ကိုနှိပ်နယ်ခြင်းဖြင့်သင်၏လိင်စိတ်နိုးထမှုကိုနိုးထရန်နှင့်ထိုပျော်ရွှင်မှုသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ရှိဆဲလ်တိုင်းကိုဖြည့်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်သက်သောင့်သက်သာရှိသည့်အေးချမ်းသောချမ်းသာခြင်းအဖြစ်သို့ရောက်ပြီဆိုပါကသင်၏သက်တော်ကိုအာရုံစိုက်ပြီးတီထွင်စွမ်းအင်နှင့်ဖြာထွက်နေသောသင်၏ခန္ဓာကိုယ်ရှိဆဲလ်တိုင်းကိုခံစားရသည်။ သင်သည်ဤခံစားချက်ကိုတွေးတောဆင်ခြင်သောအခါသင်၏လိင်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကိုနှိုးဆွတော့မည်မဟုတ်သော်လည်းသင်၏ခန္ဓာကိုယ်၏ပျော်ရွှင်မှုမှာဆက်လက်တည်ရှိနေ ဦး မည်။ ၎င်းသည်သဘာဝအမြင့်နှင့်တူပြီးသင်မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ပါကထိုခံစားမှုသည်နာရီပေါင်းများစွာကြာလိမ့်မည်။
ငါအော်ဂဇင်မပါဘဲ ၁၆ ရက်ကုန်သွားပြီ။ ဒီနည်းကိုနေ့စဉ်သုံးနေတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သည်၊ ၎င်းသည်သင့်အတွက်လည်းအကျိုးရှိမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ သင်၏ PMO ကိုအခမဲ့ဆက်လက်မထားရှိနိုင်ခြင်းကိုသင်စိတ်ပျက်နေလျှင်၎င်းကိုစမ်းကြည့်ပါ။ [မှတ်စု: တချို့ကကွောငျးတှေ့ တစ်ကိုယ်တော်နည်းစနစ် (အရမ်းလှုံ့ဆော်ဖို့) ပထမဦးဆုံးမှာအသုံးဝင်မဟုတျပါ, ဒါပေမယ့်ချိန်ခွင်လျှာပွနျထားတစ်ချိန်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပျက်ဖြေလျော့ဘို့အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။ ]
(ထိုစုပ်ခွက်သို့မဟုတ်စည်ပိုင်းထဲမှာလိင်အင်္ဂါတွင်) ရေအေးသို့မဟုတ်အအေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်း (ဒီစာမျက်နှာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောညွှန်ကြားချက်ကိုကြည့်ပါ) ခန္ဓာကိုယ်ချငြိမ်သက်ဟန်
ယင်းကြိုးစားပါ အနီရောင် X နည်းစနစ်
သငျသညျတခုတိုက်တွန်းကြသည့်အခါဤအ3ခြေလှမ်းများယူ: သင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဆီး။ ဒါဟာသင်အနားယူကူညီပေးပါမည်။ သုတေသန willpower အားထုတ်မှုရုန်းကန်မှုများခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်ပျက်ဆီးနိုင်သည်ကိုပြသထားပါတယ်အဖြစ်ဂလူးကို့စနဲ့ရေစာကိုစားကြလော့။ (ဤနေရာတွင်သုတေသန: အဆိုပါ MYLN နည်းလမ်း။ တစ်ဦးကကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်နည်း။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာတစ်ခုသို့ချက်ချင်းရောက်ပါ။
ဖတ် အကြံဥာဏ် & လေ့လာတွေ့ရှိချက်များပြန်ဖွင့် - reboot မှတဆင့်ပြုလုပ်သောယောက်ျားများရေးသားထားသော“ advice columns” ။
ပြန်လည်အပြန်အလှန်ပစ်ခြင်း (သို့) ပြန်ဖြစ်ခြင်းကာလအတွင်းငါ peeing သည်သင်ခံစားရသမျှ၏အရေးတကြီးချက်ကိုချက်ချင်းလျော့နည်းစေသည်ကိုငါတွေ့ရှိခဲ့ သငျသညျအနည်းငယ် edging ခဲ့ရင်တောင်ဒါ, တစ်မိနစ်ချိုးယူ။ ဆီး။ ကျွန်တော်အာမခံပါတယ်၊ ဒါဟာအစွန်းကိုချွတ်ယူ။ ရုတ်တရက်သင်သည် ထပ်မံ၍ တွေးတောဆင်ခြင်နိုင်ပြီးသင့်အားမည်သည့်အရာကိုမဆိုအာရုံစိုက်ရန်တားဆီးသော PMO ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းမြင်ကွင်း / မြူမရှိတော့ပါ။
သင့်ရဲ့စွဲလမ်းအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေတစ်ဦး (ဖုန်းဖြင့်သို့မဟုတ်လူတစ်ဦးအတွက်) စကားပြော
ငါအသက်ရှူနည်းစနစ်ကိုသုံးတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ငါ့လက်တွေကိုဒူးထောက်လိုက်တယ်၊ တစ်ဝက်ကွေးကုပ်ပြီးငါ့အဆုတ်မှာရှိတဲ့လေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်တယ်။ ထို့နောက်ငါလက်များကိုငါ့တင်ပါးပေါ်၌ဖြောင့်ဖြောင့်လိုက်သည်။ ၁၀ သို့ရေတွက်ပါ။ ထို့နောက်နက်ရှိုင်းသောယောဂအသက်ရှူခြင်း (ရင်နှီးခြင်းမှတဆင့်အသက်ရှူခြင်း၊ ပခုံးများမဟုတ်ဘဲ) နှင့်ငါ့လက်များကိုငါ့အနားသို့လျှော့ချလိုက်သည်။ ဒါကိုအကြိမ်အနည်းငယ်လုပ်ပါ၊ ပြီးတော့သူကစိုက်ထုတ်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ပျောက်သွားအောင်ကူညီပေးပါတယ်။
ကြည့်ရှုခြင်းခွဲစိတ်ခြင်း (သို့)“ စုစုပေါင်း” စသည့်လိင်မဟုတ်သောအင်တာနက်ဗီဒီယိုကိုရှာပါ။ ယောက်ျားလေးတ ဦး က“ စုစုပေါင်းအရာတစ်ခုခုကိုသင်မြင်သောအခါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာတစ်ခုမှလုပ်ချင်စိတ်မရှိဘူး” ဟု“ စုစုပေါင်း” ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုရန်အထူးအကြံပြုခဲ့သည်။
တစ်ဦး Install သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာညစ်ညမ်း blocker
အပြင်ထွက်သည်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါငါပြန်ကောင်းလာဖို့အချိန်အကြာကြီးမထွက်တော့ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်။ ငါရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာအတိအကျဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ သင် porn-induced ED ရှိသည့်အခါထွက်သွားပြီးမိန်းကလေးများကိုရိုက်နှက်ခြင်းသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးကြောက်စရာကောင်းသောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဆိုလိုတာကသင်ပျောက်နေတာကိုသင်ကိုယ်တိုင်ညွှန်ပြနေခြင်းဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်ငါအပြင်ထွက်ပြီးမိန်းကလေးတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါသူတို့ထဲကိုဝင်ဖို့မစဉ်းစားတော့ဘဲသူတို့အနားမှာသူတို့အနားမှာရှိနေတာရယ်၊ သူတို့ရယ်ပြီးပြုံးလိုက်တာကိုကြားရတော့မယ်။ ကဲ့သို့အထိခိုက်မခံ shit ။ စိတ်ခံစားမှုပဲ့တင်ထပ်သောပစ္စည်းပစ္စယ။ အချို့လူများကသဘောမတူနိုင်ခြင်း၊ မိန်းကလေးများအားဘားဆိုင်များ၊ ပါတီပွဲများနှင့်စသည်ဖြင့်မရနိုင်ခြင်းကြောင့်ဒေါသ၊ မင်းကိုပြန်ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာအခြေခံအသိစိတ်ကိုထိန်းချုပ်ရုံသာမကဒီဟာကဘာကြောင့်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်သတိရဖို့လိုတယ်။
နောင်အနာဂတ်မှာအခြားရွေးချယ်စရာများရှိခဲ့ရင်တောင်သင်ကိုယ်တိုင်အခြားနည်းလမ်းများပေးပါ။ နာကျင်မှုအားလုံးကိုကျိုးနွံစေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်တောင်သင်တွေ့လိမ့်မယ်။ ငါဒီလိုစလုပ်ပြီးကတည်းကမိန်းကလေးတွေကိုပိုကြိုက်လာတာတွေ့ပြီ။ အကြံဥာဏ်တစ်ချက် - သင်ဤသို့ပြုလုပ်စဉ်များများစားစားမသောက်ပါနှင့်။ အရက်သောက်ခြင်းသည်သင်ဤမိန်းကလေးများနှင့်မချိတ်ဆက်မိလျှင် ပို၍ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
သင်၏ relapse အတွက်ခလုတ်ကိုသီးခြားခွဲထားပါ၊ နောင်တွင်ယင်းကိုကျော်ဖြတ်နိုင်မည့်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေပါ။ ဥပမာအားဖြင့်နောက်တစ်ကြိမ်ပေါ်လာသည့်အခါသင်ဘာလုပ်မည်ကိုပြန်ပြောပါ။ နောက်လာမည့်တေးဂီတဗီဒီယိုတစ်ခုတွင်ပေါ်ပေါက်လာသည့်လိင်စိတ်နှိုးဆွသည့်ပုံရိပ်တစ်ခုပေါ်လာသောအခါ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ပိတ်ပြီးကွန်ပျူတာမှ ၁၀ မိနစ်အနားယူပါမည်။ ”
၏တဦးတည်းနှင့်အတူစမ်းသပ်မှု rewiring tools များ
တက် Get နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာကနေဝေးသွားပါ။ အခုတော့။ လမ်းလျှောက်ယူပါ။ တစ်ဦး Starbucks ကမှာထွက်ချိတ်ဆွဲထားတယ်။ တစ်ခုခုလုပ်ပါ။
ဘူးဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပျက်, ဒါပေမယ့်ဘာပဲ မဟုတ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်တက်ရိုက်နှက်
ရေရှည်တွင်သင်အာရုံစူးစိုက်သင့်သောအရာသည်သင်တိုးတက်နေသည်ရှိမရှိကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ သင်လုပ်နိုင်သမျှအဆိုးဆုံးကတော့ပြန်သွားပြီးနောက်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ “ အိုး၊ ငါမအောင်မြင်ဘူး၊ ဒါကအရေးမကြီးတော့ဘူး” လို့စဉ်းစားနေသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမလုပ်ပါနဲ့၊ ဒါကပြန်လည်ထူထောင်ရေးလမ်းစဉ်ဖြစ်တယ်။ အဆိုပါတိုက်တွန်းမှုများလာသောအခါကိုယ့်ကိုယ်ကို "NO!" (ဟက်တာဟက်ဟက်ဟက်ဟင်ဟုတ်လားဟင်ဟင်ဟင်ဟမ်ဟေ့ဟေ့ဟေ့ဟ့ဟ့ဟ့ဟ့ဟ့ဟ့ဟ့ဟင့်ဟေ့ဟေ့ဟေ့ဟေ့ဟေ့ဟေ့ဟေ့ဟေ့ဟေ့ဟေ့ဟေ့ဟေ့ဟေ့ဟေ့ဟေ့ဟေ့ဟေ့ဟေ့ဟေ့ဟမင်းဟေ့ဟေ့ဟမင်းဟေ့ဟေ့ဟေ့ဟင့်း] ဒါ့အပြင်တခြားအရာတစ်ခုကိုစတင်စဉ်းစားတွေးတောပါ)
, အကောင်းတစ်ဦးကိုယ်ဟန်အနေအထားနှင့်အတူ, သင့်အခြမ်းမှာလက်အားမတ်တတ်ရပ်။ အခုဆိုရင် (ဒီနေရာမှသင်တန်းမျှ strain ရုံသငျသညျအထကျမျက်နှာကျက်အပေါ်တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှု) တကယ်သင်၏လည်ပင်းကွေး, ဖြောင့်ဖွင့်ရှာဖွေနေ။ အခုတော့တဦးတည်းခြေလျင်ပေါ်မှာရပ်နှင့်သင့်မျက်လုံးများကိုပိတ်ပါ။ တစ်မိနစ်သို့မဟုတ်ဒီတော့အဘို့ဤကိုင်ထားပါ။ ) က) တိုးမြှင့်ချိန်ခွင်လျှာ / ညှိနှိုင်းထို့ကြောင့်တိုးမြှင် athleticism) သင်ကူညီပေမယ့်အခိုက်အနေမပေးနိုငျ (အထူးသဖြင့် kinesthetic အသိအမြင်: ဒါကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်နည်းနည်းလိုက်တယ်အသံ, ဒါပေမယ့်သူက (အနည်းဆုံးငါ့အဘို့) အခြို့သိသာအကျိုးကျေးဇူးများကိုကမ်းလှမ်း ဒါလုံးဝမတရားသော / ညစ်ညမ်းအကြံအစည်များအတွက်အခန်းတစ်ခန်း) လွှဲပြောင်းအဓိပ္ပာယ်ကို: () သင့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်သင့်ဦးနှောက်ထဲမှာလက်ကျန်ငွေစာရင်းများအတွက်ရုန်းကန်, သင်ပြုတ်ကျခြင်းမရှိဘဲရုန်းကန်နိုင်သော, ခံစား, ထိန်းချုပ်ခံစားမှု
စနစ်တကျစုစည်းပါ - သင်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းကိုရပ်တန့်လိုပါကလုပ်ရန်မှာစနစ်တကျလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်အလုပ်များခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏အခန်းတွင်သင်၏လက်မကိုဖြုန်းတီးရန်အချိန်မရှိသောကြောင့်မင်း PMO ကိုလက်ခံရန်အချိန်မရှိတော့ပါ။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရလျှင်ရပ်တန့်ပြီးမပတ်ပါနှင့် ပထမ ဦး စွာအိပ်ပါ။ ဒါက ၁၀ နာရီအိပ်စက်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။ 10-6 အတွက်အိပ်ပါ။ သင်အိပ်ယာမ ၀ င်ခင်အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများအပါအ ၀ င်မနက်ဖြန်သင်လုပ်ချင်သောအရာများစာရင်းကိုရေးပါ။ ဒါကကျွန်မကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်။ ငါနိုးလာသောအခါကျွန်ုပ်သည်ထိုနေ့တွင်လုပ်ရန် / လိုချင်သည့်အရာအားလုံးကိုမစဉ်းစားလိုပါ။ တစ်ခုခုကိုလုပ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို ၃-၅ ခုသာမပေးပါနဲ့။ ၎င်းကိုလေးစားလောက်သောအရွယ်စာရင်းတစ်ခုပြုလုပ်ပါ။ တစ်နေ့လျှင်ကျွန်ုပ်၏စာရင်းတွင်အရာ ၁၄ ခု (အီးမေးလ်များရေးသားခြင်း၊ ခြောက်သွေ့သောသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း၊ အလုပ်သမားနေ့ပြီးနောက်ရေကူးရန်ရေကန်အသစ်တစ်ခုရှာဖွေခြင်း၊ အစားအသောက်ဆိုင်များစသည်တို့) ကိုများသောအားဖြင့်လုပ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိရသည်။
အိမ်မှာမဟုတ်သောကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်၏အလုပ်ကိုလုပ်ရန်နေရာရှာပါ။ စာကြည့်တိုက်သို့မဟုတ် Starbucks ကိုစမ်းကြည့်ပါ။
မင်္ဂလာပါနှင့်သင့်အရေးပေါ် Relapse တုံ့ပြန်မှုဖှဲ့စညျးတုံ့ပြန်မှု (ERROR) မှကြိုဆို
သင်တစ်ဦးက RELAPSE ရှိသည်ဖို့အကြောင်းနှင့်သင်အကူအညီတောင်းရှိသည်!
အနည်းဆုံးအား #2 အပြင်အောက်ဖော်ပြပါအရာ 1 (သင့်ဒစ်ကိုချွတ်သင်၏လက်ကိုယူ!) ပါအခုအချိန်မှာ! အောက်ဖော်ပြပါညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာခြင်းမအားဖြင့်သင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လုံ့လရှိသူသာယာဝပြောရေးဒီလောက်စွန့်နေသောခေါင်းစဉ်:
ပိုကောင်းမယ့်အိမ်သာထဲမှာ piss Go
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို / တက်ဘလက် / ဖုန်းကိုပိတ်ထားပါ
ပြင်ပတွင် GO! (သင်ကဒီလုပ်ဖို့ fapping ရပ်တန့်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်)
30 တွန်းအားပေး-ups လုပ်ပါ
နက်ရှိုင်းစွာ3ကြိမ်နှင့်ထွက်ရှူ
အခြို့သောအပြေးဖိနပ် (နှင့်အဝတ်အစား) ပေါ်တွင်တင်ကာပြေးသွား, ပြေးရတာ, Sprint
သငျသညျဆီးနှင်းတို့ကဝိုင်းရံနေတယ်ဆိုရင်ပြင်ပတွင်သွားနှင့် 20 snowballs အောင်
သငျသညျသဲကဝိုင်းနေတယ်ဆိုရင်ပြင်ပတွင်သွားနှင့် 20 sandballs အောင်
ကြောင်းလမ်းအတွက်သင့်ရဲ့ mom, Call နှင့်သင်သူမ၏ခစျြသူမပြောပြပေမယ့်မရ
အလေးအနက်ထားပြောရလျှင်၊ သင်သည်ဤစာရင်းကိုတစ်လျှောက်လုံးဖတ်ခဲ့ပြီးမည်သည့်အရာမျှမလုပ်ခဲ့ပါက၊ fap ၏တွန်းအားကိုခံစားရဆဲဖြစ်သည်ဆိုပါကသင့်အားစိုက်ထူသောကြက်နှင့်နာကျင်ကိုက်ခဲသောဘောလုံးများကိုယူပြီးလန်းဆန်းသောရေခဲရေတစ်ထပ်ဝင်ရန်သင့်အားဝံ့ဝံ့သည်။ လူတွေဟာသူတို့ဟာဗုံးလို့ပြောကြတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာမြစ်နားမှာရှည်လျားတဲ့နွေရာသီမှာပဲသူတို့ကိုများသောအားဖြင့်ယင်ကောင်တွေထိုင်နေတဲ့ဖားများနှင့်အတူဖားများပါရှိသည်။ များသောအားဖြင့်ထိုတွင်ယင်ကောင်များထိုင်နေတတ်သည်။ ပြာလဲ့သောကောင်းကင်ပြာအောက်လမ်းလျှောက်ရင်းကျွန်ုပ်၏ခြေရာများ၏စည်းချက်သံကိုနားထောင်ရင်းလတ်ဆတ်သောမြက်ပင်ကိုအနံ့ခံကြည့်ပါ။ လတ်ဆတ်သောလေထုထဲတွင်ရှူရှိုက်မိခြင်းသည်အလွန်အားရှိစရာကောင်းသည်ဟုတစ်ခါမျှမခံစားခဲ့ရပါ။ ၎င်းသည်မြစ်ကမ်းပါးပေါ်ရှိခြောက်သွေ့သောမြက်မြက်မြက်များထဲမှမြည်သံမြည်သံများကြားနေရသည်။ ၎င်းသည်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ ငါထပ်စဉ်းစားနေတာလဲ ……ဤသည်သင်၏အရေးပေါ်သက်ဆိုင်သည့်တုံ့ပြန်မှု (ORGANIZED) တုံ့ပြန်မှု (အမှား) ၏အဆုံးဖြစ်သည်။
ဒါကကူညီနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ် မင်းလုပ်နိုင်တယ် အပေါ်အရာအချို့ကိုလုပ်ပါ အတွေးရထားကိုစွဲလမ်းစေပြီး NOW ကအခြားအရာတစ်ခုခုကိုရွေးချယ်သည့်ရထားလမ်းကိုဖယ်ရှားပါ။ မင်းရဲ့ဒစ်ကကောင်းလိမ့်မယ်။ မင်းရဲ့မြည်းကြွက်သားတွေကိုနည်းနည်းပဲဆုပ်ကိုင်ထားတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းအောင်သွားပြီးသင့်ရဲ့ porn / fap အခြေအနေကနေငရဲကိုဖယ်ထုတ်ပါ။ ရှူပါ အရမ်းကောင်းတယ် သင်ဤကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်သင်ဝမ်းသာပါလိမ့်မည် လွယ်ကူသောအရာကိုမရွေးချယ်ပါနှင့်။ ယခုဤကိရိယာမှဝေးစွာသွားပါ။
မှတ်စု: အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုဆိုသည်မှာဘိုးဘေးတို့၏ ဦး နှောက်နှင့်ဘာမျှမတူပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုမည့်အစားထိန်းချုပ်မှုကင်းမဲ့သည်ဟုခံစားရလျှင်၊ porn မပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (သို့) ဦး နှောက်လမ်းကြောင်းများတူအောင်လုပ်သော porn fantasy …) ကိုကြိုးစားကြည့်ပါ။ (သင် porn နှင့် / သို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောပွတ်တိုက်မှုများမရှိဘဲအလွယ်တကူအထွတ်အထိပ်မရရှိနိုင်ပါကသင်၏ horniness libido စစ်စစ်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏“ စွဲလမ်းနေသော ဦး နှောက်”) အော်ဟစ်သောအသံမရှိပါ။ အထက်ပါအတွေးအခေါ်များကို သုံး၍ မိမိကိုယ်ကိုအာရုံပျံ့လွင့်စေရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါ။ )
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုအောက်ပါလကျထကျကျြောထပ်မံကျနည်းပြင်းထန်သောကနဦးဆွ (အဘယ်သူမျှမကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း) ကိုလျော့နည်းပြင်းထန်သော။ တိုးတက်မှုကိုသင့်ရဲ့ neurochemistry စီမံခန့်ခွဲဆင်းလာပါတယ်။
သင်သတိရပါ မဟုတ် သင့်ဦးနှောက်၏စရိုက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအင်တာနက်ပေါ်တွင်ပေါ်အဆုံးမဲ့, ဝတ္ထု, ဒြပ်ဆွယခုရရှိနိုင်၏ neurochemical အလုအယက်တိုးလာတယ်လို့မကောင်းတဲ့လူတစ်ဦး။ ဤရလဒ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ပြောင်းလဲလမ်းကိုအတူအဲဒီလိုရှုပ်ရှက်ခတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင့် fluke ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပင်ဆိုးရက်, ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်အတူအလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းရှိကြလော့။
သငျသညျရှုမွငျကွသောအရာတို့ကိုများ၏ content ကြောင်းစိတ်ကိုထားပါ သင့်ဦးနှောက်၏စရိုက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှြဒပ်မပါသော။ ဒါဟာရုံ neurochemical ပြင်ဆင်ချက်-ပေးသောကံကိုသာချက်ချင်းကယ်ဆယ်ရေးပြီးနောက်စိတ်ကိုသင်၏ပြည်နယ်ပိုဆိုးစေသည်ရှာဖွေနေသည်။ မကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေကို Self-စေရန်ဆေးကလူကိုမောင်း, ဒါမကောင်းတဲ့ feeling မဆိုပိုပြီးအချိန်ဖြုန်းဖို့မဟုတ်ပါဘူးစမ်းပါ။
မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကိုဒီရှေးခေတ်အပိုင်းအခြားကိုမင်းလက်ထဲအပ်သွင်းလို့မရဘူး။ ၎င်းသည်နေ့စဉ်ဘ ၀ ၌သင်၏အူတိုင်အဆင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လွန်းသည်။ သငျသညျအရာတစျခုလိုချင်သည်နှင့်အခြားအရာတစ်ခုခုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လိုတဲ့အခါ, ပေါင်ထိုးပြင်းထန်သောအတွင်းပိုင်းပconflictိပက္ခစေပါတယ်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ပြောသကဲ့သို့
ငါစလစ် ups ဘုံဖြစ်ပျက်မှုဖြစ်နိုင်သည်သတိပြုမိပေမယ့်သူတို့ကတစ် ဦး ချင်းစီကတခြားကနေထပ်မံနှင့်ထပ်မံဖြန့်ဖြူးခံရဖို့စတင် ငါ ၅ ရက်ဟာကြီးမားတဲ့သဘောတူညီမှုဖြစ်တယ်၊ ပြီးတော့ ၆ နဲ့ ၁၁ လို့စဉ်းစားခဲ့ဖူးတယ်။ အခုငါဟာလတွေ၊ ဒါကြောင့်သန်စွမ်းနေပါ၊ မေးစေ့ကိုမေးပါ။ ဥမင်၏အဆုံး၌တောက်ပသောမီးရှိကြောင်းသတိရပါ။
ယင်းအစား၊ သင်သည်သင်၏ limbic system ကိုသွယ်ဝိုက်နည်းဖြင့်သွယ်ဝိုက်နည်းဖြင့်သုတ်သင်ခြင်းဖြင့် superstimuli မှဖြစ်နိုင်သမျှအတိုင်းအတာအထိရှောင်ခြင်းနှင့်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်မှုများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်နောက်ပြန်စမ်းသပ်မှုကိုပြုလုပ်ပြီးနောက်။ ဆုတ်ယုတ်မှုများကသင့်ကိုအောင်မြင်မှုများစွာသင်ပေးနိုင်သည်။ သင်၏အတွင်း GPS ကိုမှန်ကန်စွာလည်ပတ်နေသရွေ့လမ်းလွဲမှုသည်အရေးမကြီးပါ။
သင်တို့သည်လည်းသူတို့အဘို့စတီယာရင်အားဖြင့်အတွင်းစိတ်ပဋိပက္ခလျှော့ချနိုင်ပါတယ် ခံစားချက်ထိန်းညှိကူညီသောအရာ: လေ့ကျင့်ခန်း, ဖော်ရွေအပြန်အလှန်, သဘောသဘာဝအတွက်အချိန်, ဘာဝနာ, etc အဲဒီတိတ်ဆိတ်အော်သံ (မတရားသော), လွယ်ကူသင့်ရဲ့ရှေးခယျြသောပန်းတိုင်များအဘို့အခုတ်မောင်းဖို့လုပ်။ ဟန်ချက်ပြန်အမျှအတွင်းပဋိပက္ခလျှော့ချပေးခဲ့။
နှင့်အညီ, သငျသညျပြန်ရောက်သွားတယ်လျှင်, သင်အလွန်အမင်း Self-အရေးပါဖြစ်ခြင်းလျှင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါ။ သင်သာလူ့င်သတိရပါ။ လူတိုင်း willpower စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အတူရုန်းကန်နေရတဲ့လူတိုင်းတစ်ခါတစ်ရံထိန်းချုပ်မှုရှုံးသည်။ သင်အလားတူရုန်းကန်မှုများနှင့်ဆုတ်ယုတ်မှုကြုံတွေ့ကြသူတွေအကြောင်းလေးစားဂရုမစိုက်အခြားလူများစဉ်းစားနိုင်သလား? ဤသည်ရှုထောင့် Self-သံသယ၏စကားသံကိုပျော့ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျမိတ်ဆွေတစ်ဦးမှအဘယ်သို့ပြောပါ့မလား သငျသညျတူညီသောဆုတ်ယုတ်မှုတွေ့ကြုံသောသူမိတ်ဆွေတစ်ဦးနှစ်သိမ့်မည်ဟုဘယ်လောက်စဉ်းစားပါ။ ဤသည်ရှုထောင့်လမ်းကြောင်းအပေါ်ကိုပြန်ရတဲ့ဖို့လမ်းညွှန်ပါလိမ့်မယ်။
ဤပြန်လည်ဖွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အလေးအနက်လေ့လာသင်ယူသည့်ကိန်းတစ်ခုရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်မလုံခြုံမှုနှင့်တန်ဖိုးမရှိဟုခံစားရခြင်းနှင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခြင်းအကြားအစက်များကိုတစ်ခါမျှမဆက်သွယ်ခဲ့ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကျေမနပ်ဖြစ်နေတာကို MO လုပ်မယ်ဆိုတာကိုတစ်ခါမှနားမလည်ခဲ့ဘူး။ ငါဟာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမယ်ဆိုတာသင်ယူရမယ်၊ ဒါကြောင့်ငါကအချိန်တိုင်းတစ်ခုခုကိုသင်ယူသည်။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာတပြိုင်နက်ထဲမှာအားလုံးကိုယူလို့မရပါဘူး။
သောရောဂါရပ် RELAPSE ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်း:
#1 Craigslist တဦးချင်းကြော်ငြာတွေ
(ငါ့အ reboot ၏အစောပိုင်းအဆင့်အဘို့ကောင်းသောမဟုတ်) #2 ချိန်းတွေ့က်ဘ်ဆိုက်များ
#4 (တစ်ခုခုနေ့စဉ်ပြုရမည်) လေ့ကျင့်ခန်းနေ့စဉ်တစ်ပုံစံလုပ်နေတာမဟုတ်
အင်တာနက်ပေါ်မှာအချိန် Killing #5
(ထိုစိတ်ကူးယဉ်ထွက်ကစားရန်ခွင့်ပြု) #12 စာဖတ်ခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံပြင်များ
ဂရပ်ဖစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများအကြောင်းကိုမိန်းကလေးငယ်များမှ Talking #13
#14 မေတ္တာပါ, နားလည်မှုအဘို့အရှည်လျားနှင့်ကြာရှည်ခံတဲ့ဆကျဆံရေး
ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အရာတစ်ခုခုပြီးမြောက် / လိုက်စားမှငါ့ကိုကိုရပ်တန့်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် #15
အားကစားခန်းမမှ Going #2
လူတစ်ဦးအတွက်မိန်းကလေးတွေကိုမှ Talking #4
အသစ်တစ်ခုကိုဧရိယာ Exploring #6
တစ်ဦးထွက်စာဖြင့်ရေးသား To-Do စာရင်းရှိခြင်း #8
စုံတွဲတစ်တွဲသည်နေ့ရက်သည်အဘယ်သူမျှမအင်တာနက်သို့မဟုတ်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အတူတစ်နေရာရာမှာ Going #10
ကျွန်ုပ်၏ PMO ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတိုးတက်မှု (ကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်မှုများနှင့်ကြောက်ရွံ့မှုများ) အကြောင်းတစ်စုံတစ်ယောက်အားပြောခြင်း။
# 12 ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကို“ အလုပ်အကိုင်” သို့ရယူခြင်းနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအရာတစ်ခုခုတွင်ပါဝင်ခြင်း
#13 ငါအင်တာနက်အပေါ်ရခဲ့လျှင်, (ထိုသို့သောစာကြည့်တိုက်ကဲ့သို့) အများပြည်သူရာဌာန၌ပြုပါ
# 14 ဖြစ်ပေါ်လာလျှင်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲတွင်လိင်နှင့်မဆိုင်သောအရာတစ်ခုချက်ချင်းပါ ၀ င်ပါ။
ကနေစိတ်ကူးများ ဒီ post:
FAP ဖို့တိုက်တွန်းရောက်ရှိတဲ့အခါမှာလေ့ပိုပြီးအရေးတကြီးကိစ္စရပ်များရှိပါသည်ပိုပြီးမဟုတ်လျှင်, သင်သွားမယ့် designated site ကိုသို့မဟုတ်လုပ်ဖို့တစ်ခုလှုပ်ရှားမှုရပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောသင်္ချာ, ဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်သမိုင်းအဖြစ်ပညာရေးဆိုင်ရာဘာသာရပ်များအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်လိုပါသလား? Khan Academy အင်တာနက်ကိုသွားဖို့အကောင်းဆုံးနေရာများ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ ဒါဟာငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအသုံးပြုသောသူတို့ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်အသုံးဝင်ဖြစ်ရှာတွေ့ကြပြီ 3000 ဗီဒီယိုများကျော်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီးရှိပါတယ်။
အကယ်၍ Khan Academy သည်သင်၏အရာမဟုတ်ပါကအတွေ့အကြုံကဲ့သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအတန်းကိုသင်လိုချင်လျှင်ကော။ MIT ကပွင့်လင်းသင်တန်းအမှတ်စဥ် Ware Self-သင်ယူသူနှင့်ရိုးရှင်းစွာသင်ယူချင်သောသူတို့အားကု သ. မရသောကြောင့် MIT ကဖွငျ့ site တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က MIT ကကျောင်းဝင်းအပေါ်ရိုက်ကူးခဲ့ဘာသာရပ်များအမျိုးမျိုးပေါ်တွင်ဗီဒီယိုများရာပေါင်းများစွာကိုဆက်ကပ်။ သူတို့ကအစ MIT ကကျောင်းသားကျောင်းသူများအားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားအမှန်တကယ်စမ်းသပ်မှုနှင့်အလုပ်တာဝန်တွေများပါဝင်သည်။ မရှိနိမိတ်လက္ခဏာကိုတက်ကလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။
သင်စာဖတ်ချင်ပေမည်၊ သို့သော်သင်စာအုပ်များ ၀ ယ်ရန်အတွက်ငွေအမြောက်အများမလိုအပ်ပါ။ Project မှဂူတင်ဘာ့ဂ် HTML ကို, EPub နှင့်ညှိအပါအဝင် formats အမျိုးမျိုးနဲ့အတွက် download ပြုလုပ်တရားဝင်လေးဆယ်နှစ်ကျော်တထောင်အခမဲ့ e-book ကမ်းလှမ်းကြောင်း site တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က Dropbox နဲ့ Google Drive ကိုလိုအွန်လိုင်းမိုဃ်းတိမ်ကိုန်ဆောင်မှုကိုစလှေတျနိုငျသညျ။
သငျသညျအခြို့သောပရဟိတအလုပ်လုပ်နေတာနဲ့တူခံစားနေကြသနည်း အခမဲ့ဆန် သူတို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိအပေါ်ဖြေကြားတိုင်းမေးခွန်းတစ်ခုကိုအဘို့အဆန်အစေ့ပေးပို့လိမ့်မည်ဟုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
သင်တစ်ဦးဘာသာစကားအသစ်ကိုလေ့လာသင်ယူချင်ပါသလား? Duo ပြောပြလိုပါသည် တကယ်အလုပ်လုပ်အခမဲ့ဘာသာစကားသင်ယူမှုကမ်းလှမ်းဟာအခမဲ့ဆိုဒ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဘာသာစကားတစ်ခုကိုသင်ယူနှင့်လည်းဖတ်ရှုဖို့အခြားသူများအတွက်ဝဘ်ဘာသာပြန်ဆိုကိုကူညီပေးပါတယ်။
ပိုများသောတွေ့နိုင်ပါသည် ဒီမှာ။ လင့်ခ်များများစာရင်းအတွက် / u / A_I_D_A_N နှင့် / u / SaidinWoT ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ / r / AskReddit post ကိုတင်ရန် / u / keiddit အပြင်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းကင်း-စွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက် midbrain function ကိုချို့ယွင်း, သုတေသီများရှာတွေ့
site ကိုအဖွဲ့ဝင်များက relapse အပေါ်အတှေး